Avengers – Infinity War – Page 2 – Filimside.net
Business Update: 102 Not Out iyo Avengers – Infinity War shalay ganacsiga ay sameeyeen
May 12, 2018 Zakarie Abdi
Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor filimkooda 102 Not Out ayaa si wacan isku celiyay Jimcadiisa labaad wuxuuna keenay 1.50 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan 50% hoos u dhac inuu sameeyay waana arin wanaagsan. Sida muuqato 102 Not […]
Rasmi: Filimka Avengers – Infinity War iyo todobaadkiisa labaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa keenay 46.75 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa labaad waana filimka labaad ee ugu ganacsiga wanaagsan todobaadkiisa labaad sanadkaan dhamaan filimada Bollywood-ka sameeyeen kaliya Padmaavat ayaa ka ganacsi wanaagsan. Avengers […]
10-ka filim Hollywood-ka ah lacagaha ugu badan Hindiya kasoo xareeyeen kadib Avengers – Infinity War oo 200 Crore gaaray
May 10, 2018 Zakarie Abdi
Shabakada Boxoffice India ayaa si rasmi ah u cadeesay in filimka Avengers – Infinity War 200 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyay sidoo kalena uu noqday filimka ugu horeeyay ee Hollywood ah darajadaan gaaro. Arbacadiisa labaad ganacsiga […]
Maqaal: Avengers – Infinity War oo noqday Blockbuster-ka 7-aad ee Hollywood-ka gudaha Hindiya
May 9, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn Avengers – Infinity War ayaa si rasmi ah u noqday Blockbuster-ka 7-aad ee ee Hollywood ah kaasi oo darajadan lixaada leh gudaha Hindiya ka gaaro. Avengers – Infinity War hadda waa filimka Hollywood-ka ah […]
Rasmi: filimka Avengers – Infinity War iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay bye bye The Jungle Book
May 8, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa ganacsi adag sameeyay Isniintiisa labaad wuxuuna keenay 5 Crore (Trade Figure) inkastoo uu Hollywood yahay hadana waa dooqa kowaad ee daawadayaasha Hindiga ah. Avengers – Infinity War haatan […]
Avengers – Infinity War oo ganacsi waali ah sameenayo 187 Crore iyo mudo 10-maalmood gudaha Hindiya
May 7, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa 30 Crore ka badan kasoo xareeyay gudaha Hindiya todobaadkiisa labaad sedexda maalmood ee ugu horeyso taasi oo ka dhigan in 187 Crore (Trade Figure) uu filimkaan mudo 10-maalmood gudaha Hindiya […]
Rasmi: Avengers – Infinity War iyo sabtigiisa labaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
May 6, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa Hindiya iska heesto asigoo sabtigiisa labaad keenay lacag labo godle ah weliba dhamaan filimada masraxa saaran isaga ayaa hogaanka u haayo. Avengers – Infinity War wuxuu […]
Maqaal: Avengers: Infinity War oo rikoor dhaqsi ah ku gaari doono darajada $1 Billion
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers: Infinity War ayaa si dhaqsi ah ugu biirayo liiska aflaanta darajada $1 Billion kusoo xareeyeen. Filimka Avengers: Infinity War mudo 9-maalmood ah wuxuu Boxoffice-ka kaga soo xareeyay isku darka gudaha USA […]
Rasmi: Avengers – Infinity War iyo Jimcadiisa labaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Avengers – Infinity War ayaa weli awood ku heesto Boxoffice-ka gudaha Hindiya asigoo 7 Crore keenay maalintiisa 8-aad wuxuuna sameeyay 75% hoos u dhac ah marka lala bar bar dhigo Jimcadiisii kowaad ganacsiga uu sameeyay. Avengers – […]
Rasmi: Avengers – Infinity War iyo todobaadka kowaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
May 4, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa ganacsi aad u weyn gudaha Hindiya ka sameeyay wuxuuna keenay 156 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa kowaad. Filimka Avengers – Infinity War Hindiya oo dhan ayuu ka gadmay weliba gobolka […]